February 2020 – Page 2 – Gulled Salah
Guddiga KMG ah ee doorashooyinka Puntland oo la shiray maamulka iyo shacabka degmada Boocame ee Gobolka Sool
Guddiga KMG ah ee doorashooyinka Puntland oo uu hogaaminayo Gudoomiyaha Guddiga Guuleed Saalax Barre, ayaa saaka waxay la kulmeen maamulka oo uu ugu horreeyo duqa degmada Boocame Xayle Xasan Shire, xildhibaannada deegaanka iyo qaybaha kala duwan ee dadweynaha Degmada Boocame ee gobolka Sool. Guddiga ayaa dadweynaha degmada la wadaagay jadwalka doorashada dawladaha hoose iyo qorshaha …
Guddiga KMG ah ee doorashooyinka Puntland oo la shiray maamulka iyo shacabka degmada Boocame ee Gobolka Sool Read More »
Guddiga doorashooyinka ayaa kulan la qaatay dhallinyarada dhigata jaamacadaha magaalada Boosaaso.
Guddiga KMG doorashooyinka Puntland oo uu hogaaminayo Gudoomiyaha Guddiga Guuleed Saalax Barre, ayaa shir ku casumay dhallinyarada dhigata jaamacadaha kala duwan ee magaalada Bosaso ee Gobolka Bari. Shirka oo ku saabsanaa soo bandhigista hannaanka xisbiyada badan si loo gaaro doorasho xor ah oo qof iyo cod ah ayaa dhallinyarada loogu sharraxay waxa uu yahay hannaanka …
Guddiga doorashooyinka ayaa kulan la qaatay dhallinyarada dhigata jaamacadaha magaalada Boosaaso. Read More »
Guddiga KMG ah ee Doorashooyinka Puntland oo safar shaqo ku maraya gobolada Puntland ayaa maanta tagay Gobolka Bari.
Guddiga KMG doorashooyinka Puntland oo uu hogaaminayo Gudoomiyaha Guddiga Guuleed Saalax Barre, ayaa saaka oo ah 8/2/2020 waxay shir kula yeesheen xarunta gobolka ee magaalada Bosaso masuuliyiinta degmada, kuwa gobolka iyo golaha deegaanka gobolka Bari oo uu ugu horreeyo guddoomiyaha gobolka Cabdisamad Yuusuf Maxammed iyo duqa degmada Bosaso Cabdisalaan Bashiir waxuuna guddigu la wadaagay jadwalka …
Guddiga KMG ah ee Doorashooyinka Puntland oo safar shaqo ku maraya gobolada Puntland ayaa maanta tagay Gobolka Bari. Read More »
Guddiga doorashooyinka oo maanta la shiray qaybaha kala duwan ee magaalada Dhahar ee gobolka Haylaan.
Guddiga KMG doorashooyinka Puntland (TPEC) ayaa Galabta magaalada Dhahar ku qabtay kulankoodii wacyigelinta iyo latashiyada dadwaynaha kala duwan ee reer Puntland. Kulanka waxaa kasoo qayb galay masuuliyiinta gobolka Haylaan oo ay hoggaaminayaan guddoomiyaha gobolka Haylaan mudane Siciid Xuseen iyo maayarka degmada Dhahar Cabdifataax Maxamed Salaad iyo xubno ka socda qaybaha bulshada ee Dhahar. Guddigu waxa …
Guddiga doorashooyinka oo maanta la shiray qaybaha kala duwan ee magaalada Dhahar ee gobolka Haylaan. Read More »
Guddiga doorashooyinka oo caawa la shiray qaybaha kala duwan ee magaalada Qardho ee gobolka Karkaar.
Guddiga KMG doorashooyinka Puntland ayaa caawa degmada Qardho ee gobolka Karkaar kula shiray qaybaha kala duwan ee dadwaynaha degmada Qardho oo isugu jiray Odayaal, aqoonyahan, haween, dhallinyaro iyo waliba guddoonka gobolka iyo degmada oo uu ugu horreeyo guddoomiyaha golaha deegaanka ahna duqa degmada Qardho Cabdi Siciid Cismaan iyo xildhibaannada gobolka. Guddiga ayaa bulshada la wadaagay …
Guddiga doorashooyinka oo caawa la shiray qaybaha kala duwan ee magaalada Qardho ee gobolka Karkaar. Read More »
Guddiga KMG ah ee Doorashooyinka Puntland oo safar shaqo ku maraya gobolada Puntland ayaa maanta tagay Gobolka Mudug.
Guddiga oo maanta safar shaqo ku yimi degmada Qardho ayaa caawa kulan la qaatay masuuliyiinta Gobolka Karkaar iyo Degmada Qardho oo uu hogaaminayo Guddoomiyaha Gobolka Siciid Maxamed Faahiye. Kulanka waxaa kasoo qaybgalay dhamaan masuuliyiinta dawladda heer Gobol, degmo oo ay ka mid yihiin Isuduwayaasha wasaaradaha, Duqa Degmada Qardho iyo xubnaha Golaha Deegaanka Qardho. Guddigu wuxuu …
Guddiga KMG ah ee Doorashooyinka Puntland oo safar shaqo ku maraya gobolada Puntland ayaa maanta tagay Gobolka Mudug. Read More »
Guddiga KMG ah ee Doorashooyinka Puntland oo safar shaqo ku maraya gobolada Puntland ayaa maanta tagay degmada Dangorayo.
Guddiga KMG ah ee Doorashooyinka Puntland oo uu hogaaminayo Gudoomiyaha Guddiga Guuleed Saalax Barre ayaa saaka kulan la qaatay maamulka iyo qaybaha bulshada ee Degmada Dangorayo oo ka tirsan Gobolka Nugaal. Guddiga ayaa uga warbixiyay maamulka iyo bulshada Dangorayo qorshaha hirgalinta hannaanka xisbiyada badan ee Puntland iyo jadwalka doorashada. Guddomiyaha Degmada Dangorayo Mudane Mukhtaar Cabdiraxmaan …
Guddiga KMG ah ee Doorashooyinka Puntland oo safar shaqo ku maraya gobolada Puntland ayaa maanta tagay degmada Dangorayo. Read More »
Gudoomiyaha Guuleed iyo xubno ka mida Guddiga oo la shiray Guddoomiyaha maxkamada sare iyo xeer ilaaliyaha Guud ee PL.
Xubno ka tirsan Guddiga KMG ee Doorashooyinka Puntland oo uu hogaaminayo Guddomiyaha Guddiga Guuleed Saalax ayaa saaka xarunta Guddiga kulan kula qaatay Guddoomiyaha Maxkamadda Sare ee Puntland Nuur Ciise iyo Xeer Ilaaliyaha Guud ee Puntland Maxamuud Xasan. Kulanka waxaa looga wada hadlay kaalinta Garsoorka ee hirgalinta hannaanka xisbiyada badan ee Puntland iyo dhamaystirka dhismaha Maxkamadda …
Gudoomiyaha Guuleed iyo xubno ka mida Guddiga oo la shiray Guddoomiyaha maxkamada sare iyo xeer ilaaliyaha Guud ee PL. Read More »
Guddiga KMG ah ee Doorashooyinka Puntland oo safar shaqo ku maraya gobolada Puntland ayaa maanta tagay degmada Galdogob.
Guddiga KMG ee Doorashooyinka Puntland ayaa maanta kulan laqaatay waxgaradka iyo maamulka Degmada Galdogob. Guddigu wuxuu bulshada usoo bandhigay jadwalka iyo qorshaha doorasho qof iyo cod ah oo ka qabsoonta dawladaha hoose ee Puntland. https://www.facebook.com/TPECPuntland CodkaaguWaaXaqaaga CodkaaguWaaMustaqbalkaaga.
Guddiga KMG ee Doorashooyinka Puntland ayaa maanta magaalada Gaalkacyo ku qabtay kulankoodii wacyigalinta iyo la tashiyada dadweynaha kala duwan ee reer Puntland. Kulanka waxaa kasoo qaybgalay masuuliyiinta Gobolka Mudug oo uu hogaaminayo Guddomiyaha Gobolka Mudane Axmed Muuse iyo xubno ka socda qaybaha bulshada ee Gaalkacyo. Guddigu wuxuu soo bandhigay qorshe hawleedka geeddi-socodka dimuqraaddiyeynya iyo jadwalka …